Simba rekuchinja rinotanga nekudeura kutya, kuronga uye kunyepa kwenhema uye kushandura shanduko yechokwadi: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 26 May 2020	• 5 Comments
Mumwedzi yapfuura, hafu yenyika yakapfurwa nekutya kukuru kweasingaonekwi nemuvengi wekorona. Vazhinji havazive kuti venhau nezvematongerwo enyika, pamwe chete nepiramidhi yemasimba (iyo yanga yakamira kubva panguva yekufungidzira), ndiyo inotarisisa mafungire enyika yedu. Vanenge zvese zvatinoona uye nokudaro tinotenda zvakapepetwa seyakaunganidzwa Trumanshow, umo pamusoro peiyo piramidi inosarudza kuona.
Icho chikamu chakakomba chehuwandu chinodyiswa kubva kune imwecheteyo piramidhi yemagetsi, asi yakavanzika seyakavanzwa pakati pevabvunji.
Kana iwe uchitsvaga chokwadi mune dandemutande rewebhu, iyo tambo inodedera uye kangaidhi anoziva kuti iwe uri muwebhu yayo. Kana iwe uchiita kudedera zvakanyanya, chipenga chinomhanya kuzokukurudzira. Isu tiri muwebhu yepasi rese (www) uye isu tinofanira kuyeuka kuti nzira yega yekubuda yakavanzwa kutidzivirira kubva mukati medu. Asi kana tangove tiri muwebhu, zvakakosha kuti tirege kuvharwa. Kushandisa mapapiro ako panguva uye kuzvibvarura poga ndiyo mhinduro chete.
Izvo zvese zvakanaka zvemifananidzo, asi tsika haina kudzikama. Izvo zvakakosha kuti titange nekuona kuti tave muhurongwa hwewebhu hupenyu hwedu hwese; chokwadi chenhema chakadzora kuziva kwedu ndokutiisa mumamiriro ekuteerera.
Kana tikaramba tichitsvaga webhu kuti tione kana tichigona kubata chipanje mune zvekunyepa, isu tinokanganwa kuti tambo yega yega yakarukwa kuburikidza nesawi
My Mbudzi 2019 bhuku inopa pfupiso yekuti iyi Trumanshow inogadziriswa sei pamwe chete. Ose radar muwashi yesimba anongova neyawo radar sub-nzvimbo. Ivo havagone kana kuti havadi kuwona mufananidzo muhombe. Dzimwe nguva izvo 'hazvisi kuda kuona', nekuti zvinouya nekubhadharwa kwemari kana basa. Mari uye mukurumbira ndicho chikonzero chevazhinji kuvhara maziso avo (kana vatowana chinhu chemufananidzo muhombe). Kazhinji kacho 'kusakwanisa kuona' nekuti munhu wese ave nenzira imwecheteyo yekuronga.
Isu tasvika pakutenda kuCrechology sekuti 'zivo isimba', tasvika pakutenda kuti kana isu tikatevera izvo zvidzidzo uye tichishingaira isu tinowana zvakawanda, asi mukupedzisira munhu wese anongodedera pane tambo dzebuve uye tinobatsira dandemutande kukura.
Zvinotora shanduko huru yekuziva kubhururuka kunze kwewebhu. Uye izvo zvinotanga nekumutsa kwekusaziva kwako kwepakutanga. Isu ngatirege kuvhiringidza izwi rekuti "kuziva" ne "kutsvaga chokwadi pawebhu," nekuti iwe uchaenderera mberi uchitarisa pane iyo webhu. Izwi rinofananidza rekuziva saka rinogona kunge riri rekuti 'mweya'.
Mubhuku rangu ndinotsanangura kuti kuziva kwedu ('mweya' wedu) kunoona hutachiona uhu. Kuziva kwedu ndiko kurivaka kwazviri zvakasikwa zvepakutanga, umo mweya wega wega unogona kufananidzwa nechitokisi chemukati chine ruzivo rwezvose zvinogona kugadzirwa semasero, asi imwe inodzora maseru stem kuti iite ruoko kana gumbo uye imwe yacho inovhura ikava sero reganda. Iwe neni tiri, saka kutaura, ndivo vakagadziri vezvisikwa zvepakutanga.
Mubhuku iro ndakafembedzerawo denda senge ratiri kuona izvozvi. Ini ndogona kuita fungidziro iyi nekuti ini ndakaona kuti zvazvino (kunyepa) chaiko anoita chaizvo hutachiona. Hutachiona huri, sokunge zvakadaro, iro riri guru rebhizimusi reiyo simba system. Chirongwa icho chinomhanya chino chaicho kubva kune simba piramidhi hachina chinhu kunze kwekuisa kweiyo stem cell ruzivo kubva kune yekutanga masero mupenyu. Hutachiona haugone kurarama pasina mushanyi. Inoda iyo yekutanga stem cell ruzivo yemaseru ekutanga (iyo yekutanga 'midzimu').
Naizvozvo, pane nzira imwechete kunze kwewebhu uye iri 'kupaza simba' nekumira kusimbisa hutachiona hutachiona. Izvo zvinotanga nekuwanikwa kwekuti iwe une simba kudarika mapuru ari muhurongwa hwehutachiona. Mushure mekuwanikwa iwe unogona kuwanazve kutenda; chitendero chekuti mweya wako unotakura ruzivo rwe cell kuti uvake kuramba uye kubvisa hutachiona.
Izvo zvinotanga nekutenda musimba rako pachako pachinzvimbo chekutenda kuchirongwa icho iwe wakamanikidzwa kuti uite kubvira uchiri mudiki (nevanhu vanozvirongerawo). Inotanga diki uye mhedzisiro yacho inoita kunge isingaonekike pakutanga. Zvino pakarepo vanhu vazhinji vakakukomberedza vanomuka uye munda wechiuto unoshanda senge zvisati zvamboitika.
Vanogadzira zvakasikwa zvepasi vachimutsa uye vadzore simba ravo rekusika uye - kunyangwe pakutanga vachiita kunge vashoma uye vasingaoneki - kuziva kunokura uye hutachiona hunorasikirwa nesimba rayo pakupedzisira kuti husvibiswe. Naizvozvo, tanga nhasi uye activate yako chaiyo kugona. Vaka iyo anti-zvinhu zvinopesana nesystem kuti tigone kuodha system. Tiri kuzozviita zvakasiyana; tiri kuzozvironga. Simbisa immune system kuti iwe neni tiri!
Nei Martin Vrijland achiramba achitaura nezve kuchengetedzeka net pawns saRobert Jensen, David Icke?
Tags: kuziva, coronavirus, Featured, immune system, simba pyramidhi, awaken, mweya, Universe, utachiwana, hutachiona system, muka, dandemutande, mweya
Saka meseji ndeyekuti: usarova makumbo, asi ziva kuti une mapapiro uye unobhururuka kubva pawebhu.
Ndiwo manzwire andingaite kuzvinzwa, kubva musi 1 ini handina kuita hanya nechinhu.
Hazvina kumbobvira ndageza maoko angu, mabhatani ese ekisimusi akabata, mabhenji ese etc.
Mhedzisiro ... fungidzira chii, vese vasina moyo pamoyo pamusoro pangu uye ini ndakataridzika sekunge ndakanga ndakasviba zvisingaiti, kana zvakanyanya kutonyanya.
Zvakare chiitiko chakanaka.
Paive nemurume aive nemafungiro akafanana mumusika we deka, isu takabva tangoziva kuti taive nechisungo, takambundirana pakatarisana, kanokwana masekondi makumi matatu! dai vaivapo vaive nezvombo isu tanga tiri
rakapunzika, chaizvo iwo Zombies ese. Takataura zvakanaka nekunyemwerera ndokusiya vanhu mune kwavo kupenga. Sodemieter kupera kune yako pussy hutachiona hwaive kuoneka kwedu.
Izvo zvaive pachena !!
Saka, izvi zvakabvumidzwa here Martin?
Chinorwadza mwoyo wako. Kirasi.
VaMediya (de Krant) vanoti pakaitwa bato rine hungwaru
Nekudaro, bato harisi haro, mutauro weiyo huru
iri kuwedzera kuwedzera kutenderedza, pane rimwe divi anonzi aya
vatori venhau? avo vanoratidza aya mavara anovanzika.
Iko kunyepa ndeyero uye kwete imwe nzira yakatenderedza, ita izvozvo zvive zvakajeka!
America yakananga kudivi raGeorge Floyd panguva yekuratidzira
« iPhone inovanza covid-19 app mune yazvino i-OS 13.5 yekuvandudza
Corona C dambudziko Covid-19 inorangaridza 2003 XNUMX Bl Blaster hutachiona hwakauraya Bill Gates »
Kushanya kwakazara: 4.247.024
OVI op Coronavirus covid-19: izvo zvatisinganzwe nezvaMaurice de Hond naWillem Engel, chikamu 2